Daryeelka Caafimaadka - Isbahaysiga Caafimaadka ee Muhaajiriinta & Qaxootiga
Fursada Maalgelinta: Deeqaha Ballaarinta Daryeelka Aan Ceymiska Lahayn
CHC-yada waxa lagu casuumay deeqaha fidinta daryeelka aan caymiska lahayn ee taageerada taageerada.
Maamulka Daryeelka Caafimaadku wuxuu sii wadaa inuu qabto shirarka inta lagu jiro Febraayo iyo Maarso kuwa xiisaynaya inay codsadaan Deeq Ballaadhinta Daryeelka Aan Ceymiska Lahayn. $35 milyan ee abaal-marinaha deeqda ah waa in adeegyada daryeelka caafimaadka la siiyo dadka dakhligoodu yar yahay ee aan caymis haysan iyo kuwa aan caymiska lahayn, iyada oo aan loo eegin heerka socdaalka. Ururada u qalma, oo ay ku jiraan xarumaha caafimaadka ee federaaliga ah, ayaa lagu dhiirigelinayaa inay ka qaybqaataan tababbarka codsiga deeqda iyo hawlaha taageerada.
Xirmooyinka taageerada codsiga deeqda ayaa dhici doona Khamiis kasta laga bilaabo 1 - 1:30 galabnimo illaa Abriil 14. Waxaad ku biiri kartaa shirarka Zoom halkan.
Codsiyada Deeqaha Ballaarinta Daryeelka Aan Caymiska Lahayn waxa la aqbali doonaa ilaa 5 galabnimo Talaado, April 15. Si aad wax badan u barato, booqo Shabkada Deeqaha Ballaarinta Daryeelka Aan Ceymiska Lahayn.
Hoos waxaa ku yaal xiriirinta ilaha caafimaadka la xiriira ee gobolka Washington. Haddii aad raadineyso ilaha COVID-19, guji halkan.
Meel ka hel Xarunta Caafimaadka Bulshada kuugu dhow
Ka fiiri adeegyada daryeelka caafimaadka gaarka ah ee SeaMar Latinos
Baadh waxyaabaha ay bixiyaan Guddiga Caafimaadka Soomaaliya
Fiiri Wada-hawlgalayaasha bulshada ee bixiya adeegyo khaas ah oo loogu talagalay soogalootiga iyo qaxootiga
Dhakhaatiirta Socdaalka Video
Ka hel macluumaadka ku saabsan isku dhafka macluumaadka dhaqanka ee ku-dhaqanka rugaha EthnoMed
Dib loo eegay 02/28/2022